Dib u eegista Toban Sano Oo Ganacsi Lagu Kala Bixiyo
Bishii Febraayo, email ayaa ku soo baxay sanduuqdayga oo iga dhigay inaan garaacdo garaacis.
Maaliyeyaashu waxay wadashaqeyn ka helayaan Soo-jeedin Maaliyadeed oo Dheeraad ah Laga soo bilaabo deeqda koowaad ee bishii Maajo 2008, Kaaliyeyaasha Xirfadleyaalku waxay sameeyeen 155 deeqo oo ka badan $ 11.6 milyan. Iyada oo qorraxdeena shan bilood gudahood, waxaan hadda ku khasbanahay dhamaanba deeqaheenna lacageed ee deeqda ah. Waxaan rajeyneynaa sameynta abaalmarino kama dambeys ah dhamaadka bisha Maarso.
Waa ogeysiis aan caadi aheyn ilaha dhaqaale ee la wadaagayo. Tobankii sano ee la soo dhaafay, Isu-duwaha Dhexdhexaadiyaha Dhexdhexaadiyaha (CCFC) wuxuu ahaa qayb ka mid ah machadka McKnight Foundation Gobolka & Bulshada (R & C) shaqada barnaamijka. Istaraatijiyadda - waxay bilowday inay noqoto shabakad barasho jimicsi St. Paul Foundation iyo McKnight oo kooxdii R & C ku qaadatay 12 koox dhaqaale oo heer qaran ah iyo kuwo maxali ah - waxay siiyeen fursado waxbarasho oo aan caadi ahayn waxayna gacan ka geysteen qaabeynta shaqada barnaamijkeena.
Isbahaysiga dhaqaalaha ayaa ka shaqeeyay sidii loo hubin lahaa xariiqa tareenka khadka dhexe ee loo yaqaan "Middle Corridor light line" (oo hadda loo yaqaan "Line Line) wuxuu ka faa'iideystey dadka ku nool xaafadda oo ka shaqeynaya xaafadaha 11-mile inta ugu badan ee suurtogalka ah. Maalgashadeeda waxay malaayiin doolar ku maalgelineysaa maalgashi dheeraad ah oo khaas ah iyo kuwa dawliga ah si ay u taageeraan: guryaha la awoodi karo, dhaqaale xoog leh oo deegaan, meelo ku-meel-gaadh ah, iyo isuduwidda iyo iskaashiga. Dhibaatadan taariikhiga ah ee qoraxda bisha June. Shaqadoodu waxay bedeshay dadka, goobaha, iyo fursadaha "ka baxsan aragtida", iyo sidoo kale saamaynta siyaasadda iyo nidaamka gobolka iyo nidaamka.
La shaqeynta dareen degdeg ah
Muuqaalka muhiimka ah ee CCFC wuxuu ahaa ujeeddadiisu ahayd mid si xaddidan ujirta nolosha iyo himilooyinka laysarka - 10-sano oo daaqad ah oo wax ka qabta maalgashiga dhismaha ee ballaadhan ee dadweynaha si loo hubiyo in dadka dakhliga hoose iyo xaafadaha ee khadka cagaaran ay ka faa'iidaystaan maalgashiga. Diyaarinta wakhti xaddidan oo ku saabsan wada-shaqayntu waxay ahayd mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee ay ku guuleeysteen sida ay u bixisay dareen degdeg ah oo diiradda saaraya hirgelinta. Fikradda waxay awood u yeelatay aasaaso kala duwan oo leh ujeedooyin barnaamijyo kala duwan si ay u daba-galaan isku-darka guud ee natiijooyinka. CCFC waxay soo ururisay ilo hanti ku filan oo ay kufilmaamayeen isla mar ahaantaana wax jawaab ah oo firfircoon. Ugu dambeyntii, wakhtigu waa xaddidaa xallinta khilaafaadka si ay u noqoto mid ficil ahaan udubdhexaad ah iyo qaab-nidaamyo. Xaqiiqdii, wadashaqeyntu waxay ku jirtaa shaqo wanaagsan oo ku jirta hay'adaha asaasiga ah iyo nidaamyada soo saaraya gaadiidka, guriyeynta, ganacsiga xoogga leh, cagaarka cagaaran iyo jaaliyadaha noolaha waxay ahayd su'aal joogta ah oo ah deeq kasta oo la sameeyey iyo sidoo kale qiimeynta guud.
Uma jeedin wadashaqeyntu inay ahayd mid aad u fiican. Xeelado ayaa la sameeyey iyo fursado seegay. Nasiib darro, dadka qaarkood iyo xaafadaha ayaa wali ka walaacsan dhibaatooyinka xaafada. Laakiin nidaamka isbedelka nidaamku aad ayuu u fog yahay wuxuuna saameyn ku yeeshay shaqada Metta Golaha, Guriyeynta Minnesota, magaalooyinka muhiimka ah iyo gobollada iyo sidoo kale shaqooyinka socda ee badan ee deeq-bixiyeyaasheena. Waa wax aan suurtagal ahayn in qof kasta ama hay'ad loogu magacaabo dhibcahaas dhibcaha ah, mana aha inaan isku dayno. Waxay ahayd wadajir dadaalada beelaha, xukuumadda, shakhsiyaadka, iyo hay'adaha abuuray mid ka mid ah dadaalada horumarinta bulshada ee ugu wanaagsan ee aan waligay arkey.
Casharrada laga bartay - iyo codsatay
Munaasabadda, Wadashaqayntu waxay muujinaysaa faa'iidooyinka la shaqeynayo dareenka sare ee fulinta fulinta, barashada wadaagga ah, iyo awoodda la xiriirta qaybaha dadweynaha, gaarka loo leeyahay iyo kuwa bulshada ee ku wajahan caqabadaha bulshadeena. Waxaan si joogto ah u adeegsaneynaa casharradii aan baranay dadaalladii cusub - laga soo bilaabo Gateway Line ee Metrooga Bariga ilaa khadka cagaaran iyo midda buluugga ah ee Waqooyi Galbeed iyo Koonfur-bari ee gobolka. Dadaallada cusub ee horumarinta dhaqaalaha magaalada iyo xiriirka ka dhexeeya gaadiidka, shaqooyinka, iyo hawlaha horumarinta shaqaalaha gobolka ayaa horumaraya. Kuwani waa tusaalooyin yar oo ka mid ah isbarbardhigyada laga soo qaado duruusta ka socota Shaqada Iskaashatada. Ogeysiiskan ayaa markii ugu horeysay igu yaabiyey. Laakiin markaan ka fekerayo guulaha laga gaaray Dhaqaalaha Xarunta Dhexe ee Wadada Waddaniga ah, waxaan u arkaa inay dhammaatay inay dabaaldegaan, illaa iyo inta aynaan xusuusnayn inaan casharrada ku sii socono, deg degga ah, iyo dedaalka udub dhexaadka ah ee khibrada wada-xiga. Haatan dib u soo noqoshada shaqada sababta oo ah had iyo goorba way badan tahay!
Waxaa laguugu martiqaaday: Maaliyadaha Dhamaystirka Finalka
Muddo ku dhow toban sano, iskaashatada Funders iyo iskaashatadayadu waxay si wada jir ah uga wada shaqeeyeen in ay ka faa iidaystaan fursadda Green Line ee faa iidada dadka iyo meelaha ku teedsan wadada. Ku soo biir CCCC iyo asxaabta June 17-keeda markii aan u dabaaldegno oo aan u wadaagno casharadii laga bartay, dib u noolaashada sheekooyinka badan, oo aan uga fekero waxqabadka. Wax dheeri ah baro.